यस्तो ठाउँ जहाँ ७० वर्षदेखि मान्छे मरेका छैनन्, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ! – List Khabar
Home / रोचक / यस्तो ठाउँ जहाँ ७० वर्षदेखि मान्छे मरेका छैनन्, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
यस्तो ठाउँ जहाँ ७० वर्षदेखि मान्छे मरेका छैनन्, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
admin January 13, 2022 रोचक Leaveacomment 81 Views
एजेन्सी । संसारमा धेरै अनौठा ठाउँहरू छन्, जसलाई थाहा पाउँदा मानिसहरू विश्वास गर्न सक्दैनन् । एउटा यस्तो ठाउँ छ जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ । आउनुहोस् हामी तपाईंलाई यो अनौठो ठाउँको बारेमा बताउँछौं जहाँ ७० वर्षमा कुनै पनि मानिसको मृत्यु भएको छैन ।
यो अनौठौ ठाउँ नर्वेमा छ । यहाँ धेरै सुन्दर ठाउँहरू छन्, जसकारण यो विश्वको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थलहरूमा समावेश छ । नर्वेको यो ठाउँको नाम लङ इरबेन हो । यो ठाउँमा कोही मर्न सक्दैन, यसको कारण थाहा पाएपछि तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्नेछ कि यस्तो किन ?
Previous विज्ञले भने ‘ओमिक्रोन महामारी झै फैलिएपनि मानव स्वास्थ्यका लागि यसकारण छ फाइदाजनक’
Next भर्खरै स्याङ्जामा घट्यो डरलाग्दो घटना दुई दिदि बहिनि माथि …….